Make-up | Great Arakan
Home Lifestyle Make-up
မျက်လုံးရောင်ချယ် (Eyeshadow) ဇာပိုင် လုပ်လေ? ( ရုပ်သံ ၁ မိနစ် ၁၁ စက္ကန့် )
ကျော်ဝင်း ခိုင် - July 1, 2018
နခမ်းနီ ရောင်စုံ ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ? ( ရုပ်သံ ၄၄ စက္ကန့် )
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - July 1, 2018 0
https://v.pinimg.com/videos/720p/86/a6/8e/86a68e8241c45c7338952b0bfe5895d7.mp4 လိုအပ်စွာတိ - အုန်းဆီ ၁ ဇွန်း အချေတိ အရောင်ချယ် ခဲတံ ၁ ချောင်း (အရောင်ချယ်ခဲတံ = ဖယောင်း + အရောင် ရောထားစွာဖြစ်လို့ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်နိုင်ပါ) လုပ်ပုံလုပ်နည်း - အပူပီးထားရေ ဖန်ခွက်ထဲမှာ အုန်းဆီ ၁ ဇွန်းနန့်၊...
နခမ်းခြောက်စွာ၊ နခမ်းကွဲစွာကို ဇာပိုင် လုပ်ရဖို့လဲ? ( ရုပ်သံ ၃၄ စက္ကန့် )
https://v.pinimg.com/videos/720p/16/ff/d6/16ffd6da19bb99296e29303ca18fa612.mp4 လိုအပ်စွာတိ - သကြားဖြူ ၁ ဇွန်း သကြားညို ၁ ဇွန်း သံဖရိုသီး ၁ ခြမ်း ပျားရည် ၁ ဇွန်း
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - June 12, 2018 0
ကလိမ့်မေတိ စစက်ယိုလားအောင် ကလေတိမှာ ရှိရဖို့ အချက် ၁၀ ချက်
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - January 5, 2018 0
ကလေ အများစုက အောင်မြင်မှု၊ အရိုအသေ ခံရမှုနန့် ကာမ ခံစားမှုကို အဓိက အလေးထားကတ်သလောက် ကလိမ့်မေတိက ယလောက်ထိ မရိုးရှင်းပါ။ ကလေ တချို့က လိုချင်စွာ ဝယ်ပီးနိုင်ကေ ဖြစ်တေလို့ ထင်တတ်ကတ်ပါရေ။ ဖေသာ အများကြီး ရှာနိုင်ကေ ဖြစ်စွာမလားဂုလို့လည်း ကလေတိ ထင်ကတ်ပါယင့်။...
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 24, 2017 0
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 22, 2017 0
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 21, 2017 0
ဂျိုင်းကို ဖြူပနာ အနံ့အသက် ကင်းဇီချင်လာ?
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 19, 2017 0
ဂျိုင်းကို ဖြူလာပနာ အနံ့အသက် ကင်းဇီဖို့အတွက် ကျောက်မီးသွေးမှုန့် ၂ ဇွန်းကို ပျားရည် ၂ ဇွန်းနန့် ရောဗျာလ် ပျစ်လာအောင်ထိ မွီပနာ ဂျိုင်းကို ဆီးဗျာလ် ခြောက်စွာနန့် လိမ်းပီးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်အကြာ ထားဗြီးကေ ရီနန့် ပြန်ဆီးချပလိုက်ပါ။ ၁ ပတ်ကို ၃...
TOO FACED CHOCOLATE BAR မျက်လုံးမိတ်ကပ် ဇာပိုင် လိမ်းဖို့လဲ?
Make-up ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 18, 2017 0
CLASSIC LIFT မျက်လုံးမိတ်ကပ် ဇာပိုင် လိမ်းဖို့လဲ?